Qalabka ceyriin ee ugu sarreeya jirka koronto xoog sare leh garaafka garaafka jirka waa saliidda coke cirbadda laga soo dhoofiyo. Nidaamka wax soo saar waxaa ka mid ah burburin, baaritaan, Qiyaasta, cajiin, sameynta, dubista, impregnation, markii labaad dubista, garaafinta iyo machining. Qalabka ceeriin ee ibta nafaqada waa saliidda coke cirbadda saliidda laga soo dhoofiyo, habka wax soo saarka waxaa ka mid ah seddex jeer oo caloolashada iyo afar jeer dubista. Heerka korantada garaafka korantada sare-sare leh iyo ibta UHP Graphite korantada Oggolaanshaha culeyska hadda jira Ult ...
Awoodda korantada sare ee garaafka korantada waxaa laga soo saaray coke tayo sare leh (ama coke-irbad heer-hoose ah). Nidaamka wax soosaarka waxaa ka mid ah calcination, batching, kneading, molding, baking, dipping, Second baking, graafationation and processing. Qalabka ceeriin ee ibta waa saliid coke cirbadda la soo dhoofiyo, iyo habka wax soo saarka waxaa ka mid ah laba jeer oo la googooyo iyo saddex dubista. Qalabka jidh ahaaneed iyo farsamo ahaanba way ka sarreeyaan kuwa korantada korantada garaafyada korantada ku shaqeeya, sida iska caabinta hoose ee ...
Qalabka ugu muhiimsan ee jirka koronto garaafka korantada jirka waa tayo sare oo batrool ah, taas oo inta badan loo isticmaalo foornada qaansoleyda ee birta. Habka wax soo saarku waxa ka mid ah kaalin, dufanka, cajiinka, samaynta, dubista, garaafaynta iyo farsamaynta. Qalabka ceeriin ee ibta naaska waa coke cirbadeysan iyo tayo sare oo batrool coke ah, habka wax soo saarkana waxaa ku jira hal uur iyo labo dubid. Hexi Kaarboon waa shirkad wax soo saar oo soo saarta, iibisa, dhoofisa, soona bandhigta ...
Isku-xidhka koronto-wadaagga 'Graphite electrode' waa qayb ka mid ah koronto-gacmeedka garaafka, kaas oo loo adeegsado koronto-garaafka. Markii la isticmaalo, waxay u baahan tahay in lagu xiro dunta madaxa ee haweeney madaxa koronto ku xiran. Wadajirka korantada 'Graphite electrode' ayaa door aad u muhiim ah ka ciyaara sameynta birta, taas oo si toos ah u saameysa shaqada korantada garaafka. Haddii uusan jirin isku-dhafnaan tayo sare leh, koronto-garaafka si fudud ayaa loo jabin doonaa oo loo dabcin doonaa, taasoo sababi doonta shilal. Sidaa darteed, gobolku wuxuu leeyahay ...